Kedu ihe bụ echiche maka igwe na-ere ahịa igwe? -Unu ala akuko-Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd.
Gịnị bụ echiche maka vending igwe ahịa?
Echiche:18 Banyere chepụtara: Kwusaanụ Oge: 18 si:
2020 na-ere igwe na-ere ahịa ụlọ ọrụ na ọnọdụ nyocha.
Na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke ìdí igwe ụdị, na Ogologo ma ọ bụ ngwaahịa enwere ike ree. Na earlNke mbu igwe na-ere ahia na China naanị soro ya rụọ ọrụ mkpụrụ ego ma ọ bụ obere ụgwọ na A machibidoro ngwaahịa ndị eresị ka mmiri ọ toụ drinksụ ma ọ bụ nke mkpọ mkpọ. N'oge a nwere ọgụgụ isi igwe na-ere ahịa dakọtara na njikọ ịntanetị na ugwo ugwo na ngwaahịa erereghịzi ị beụ mmanya, nri nri na ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị.
Machineszụ ndị e ji ere ego bụ ngwa nkịtị of azụmahịa akpaaka, ha na-arụ ọrụ na-enweghị njedebe site na oge na ebe, chekwaa ike ma kwado azụmahịa. Ha bụ a makwaara dị ka elekere 24-mini-marts. Vending igwe ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ kwupụta ozi technology na n'ihu echiche.
2020 Vending igwe ụlọ ọrụ na-emekarị nyocha
Dị ka ihe ndị kasị mkpa ụgbọelu na ọhụrụ retailing usoro, vending igwe ndị ọzọ kọmpat, mgbanwe na wider ngwa ndapụta gụnyere ụlọ ọrụ ọfịs, ụgbọ njem ehiwe, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ahịa mall, ụlọ mmepụta ihe na na na-enye adaba ọrụ na-eji ọkụ n'ebe ahụ. Ahịa igwe na-ere ahịa ga-anọgide na-eto eto yana mmụba nke ụlọ ọrụ a na mmepe nke ịkwụ ụgwọ ekwentị na maka oge 2019-2025 a na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu kwa afọ ga-abụ 30% site na nkwado sitere na atumatu steeti na iwu ụlọ ọrụ.
Nke mbụ: Industrylọ ọrụ na-ere igwe na-abanye n'oge nke mmadụ ọ bụla.
Ọzọ: Vending igwe na-elekwasị anya nke mmepe na ọgụgụ isi retailing ahịa na iche iche azụmahịa ụdị.